Usiza abazali baveze izingane ezifihliwe
ZIMHAMBELA kahle izinto uLethabo Mathatho maduze ozobonakala ohlelweni oluthi Ingane Yami nala ezobe esiza abafuna ukwethula izingane zabo kubantu abashade nabo nabakade bengazazi. Isithombe: Sithunyelwe
INTOKAZI ezakhele igama kwisizini yesibili yohlelo lwabesifazane abadla izambane likapondo iThe Real Housewives of Johannesburg, uLethabo Mathatho, izokwethula uhlelo oluthi Ingane Yami.
Lolu hlelo luzoqala kuMzansi Magic ngo-Okthoba 20, ngo-8 ebusuku. Le ntokazi izoxoxisana nabantu abafuna ukubikela abantu abathandana nabo, noma abashade nabo ukuthi kunengane abebeyifihlile, nasebefuna yaziwe.
UNomsa Philiso ongumqondisi wezinhlelo kwaM-Net, uthe olunye lwezinhlelo abafuna ukuthi abantu baxoxe ngezindaba ezenzeka kuleli nase-Afrika yonkana.
“Lapha sizosiza abantu asebefuna izingane zabo zihlangane nezinye abazithole emshadweni kodwa bazifihla ngenxa yokuthi bazithola ngaphandle. Lolu hlelo luvusa imizwa ehlukene ngoba usizi nobuhlungu buzovela kuzona zonke iziqephu. Kukhona konke abakufuna laba, ukukhuluma iqiniso bakhululeke kulezi mfihlo abanazo bahlanganise wonke umndeni wabo,” kuchaza uNomsa.
Unxuse ababukeli ukuthi bangaphuthelwa nayisiqephu esisodwa uma uhlelo seluqalile.
“Kuzovela izizathu zokuthi yini edala kube khona izingane ezifihlwayo uma umuntu eshadile. Okunye okuzogqama wukuthi kungani imindeni imangala uma sekuvela iqiniso elifana naleli. Okunye okuzogqama kulo wukuthi izingane ezitholakale ngaphandle komshado zithwala kanzima kanjani ekutheni zihlangane nabazali bazo futhi zihlale nabo,” kuchaza uNomsa.
Uthe kwesinye isiqephu kuzobonakala umndeni waseKing Williams Town, lapho ubaba wakhona obesehlale iminyaka engu-18 efihle ingane yakhe.
Lona wesilisa uzobe efuna ukwazisa umkakhe ukuthi unendodakazi ehlala eGoli, ayithumelela imali nyanga zonke.